Digniinta Fasaxa Fasaxyada Bayram ee Loogu Talo Galay Badbaadada Gaadiidka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTallaabooyinka la qaadayo marka laga hadlayo amniga taraafikada inta lagu jiro ciidaha
Tallaabooyinka la qaadayo marka laga hadlayo amniga taraafikada inta lagu jiro ciidaha
09 / 08 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
tillaabooyin la qaadayo marka laga hadlayo amniga taraafikada inta lagu jiro fasaxa
TMMOB Rugta Injineerinka Farsamada, Fasaxyada Fasaxyada iyo Badbaadada Gaadiidka marka loo eego taxaddarrada qaar ee ay qaadi doonaan wadayaasha iyo mas'uuliyiinta ayaa digniin madax-ilaa-madaxa ah sameeyay.
Ciid al-Adha waa inta u dhaxaysa 11-14 August laakiin markii lagu daro isbuuca dhammaadka, 10-18 waxay noqon doontaa maalin fasax ah inta u dhexeysa Agoosto iyo 8. Adeegsiga fasaxa sanadlaha ah, waxaan galaynaa toddobaad kaas oo cufnaanta taraafikada iyo khatarta ay u kordhayaan. Si kastaba ha noqotee, sida aan had iyo goorba u aragnay, shilalka taraafikada ayaa si isdaba joog ah u barbar socda korodhka cufnaanta taraafikada inta lagu guda jiro ciidaha, iyo sawir ah in boqolaal muwaadin ah ay naftooda ku waayaan sanad walba kumanaana ay ku dhaawacmaan. Tani waxay muujineysaa muhiimadda taxaddarrada iyo taxaddarrada ay qaadaan wadayaasha iyo mas'uuliyiinta ka hor intaanan u aadin fasax.
Sida ku xusan xogta Agaasinka Guud ee Amniga, 2018 kun oo 3 qof ayaa naftooda ku waayey 373 shilalka taraafikada iyo 30 kun oo 6 qof ayaa ku dhintey maalmihii 675 shilka kadib. Lixdii bilood ee ugu horreeyay ee 2019, kun qof oo ah 54 qof; Dadka 101 ayaa naftooda ku waayey shilalka taraafikada inta lagu gudajiray Fasaxyadii Sonkorta ee ugu dambeysay. Dhamaan shilalkaasi waxay mar kale muujiyeen muhiimada kontoroolka dadweynaha.
Maaddaama Rugta injineerinka farsamada iyo ururkooda xirfadleyda ah, Rugta Injineeriyada Mashiinka, oo aad u yaqaana gawaarida gawaarida, naqshadeynta iyo soosaarista si waafaqsan sharciga, waxaan jeclaan lahayn inaan liis garaynno talooyinka farsamo ee soo socda si loo yareeyo shilalka taraafikada inta lagu gudajiro Ciidda:
dayactirka: Bareega gawaarida, dahaarka, taayirrada, qalabka hore, nidaamka korantada, nidaamka dareeraha, saliida matoorka, heerka kuleylka iyo wixii la mid ah. dayactirka waa in lagu sameeyaa adeegyada idman ama awooda u leh.
Dayactirka baabuurta waa in la fuliyaa ugu yaraan hal toddobaad kahor bixitaanka. Isla markii gaadhigu ka dhammaado shaqada, waa inaadan markiiba ka bixin. Kahor intaadan wadin safar dheer, gawaarida waa in loo istcimaalaa inyar iyo ka dib dayactirka, cillado suurogal ah ama khaladaad ayaa dhici karta in la arko iyo qeybaha loo isticmaali doono sida guntin bir biriqsi ah kahor intuusan safrin. Gawaarida leh qeybaha bareega (pads, durbaannada, discs) waa in si buuxda loo joojiyaa afar ilaa shan jeer ka hor intaadan ku wadin wadooyinka baabuurta yar ama xawaare hoose.
taayirada: Cadaadiska hawada ee dhammaan taayirada waa in lagu kordhiyaa “gaariga öncesi kahor safarka. Taayirrada jiilaalka waa in loo adeegsadaa xilliga qaboobaha iyo taayirrada xagaaga. Adeegsiga taayirrada jiilaalka ee xagaaga ayaa kordhinaya fogaanta birta. Taayirrada 6 sano waa in la beddelaa. Taayirada cusub waa inaan loo isticmaalin muddo dheer. In kasta oo qoto dheer ee taayirku si sharci ah looga baahan yahay inay ugu yaraan noqoto 1,6 mm, khubaradu waxay ku talinayaan taayirrada xagaaga ugu yaraan xajmiga dhererka 3 mm.
downloads: Cadadka rakaabka iyo rarka lagu qaadi karo gaariga waa inuusan dhaafin qiimaha shatiga gaariga.
Suunka kursiga iyo badbaadada culayska: Suumanka kuraasta waa in lagu xiraa gawaarida, basaska, basaska, basaska iyo dhamaan gawaarida waana in xamuulka boorsada uu xirnaado.
Fooga iyo fogaanta la soco: Maaddaama culeyska gawaarida ciidaha uu ka badan yahay isticmaalka maalinlaha ee socdaalka, masaafada xigta waa in la kordhiyaa marka la barbar dhigo gaariga madhan. Darawalka gaariga fasaxa waa inuu awood u yeeshaa inuu ku niyad jabiyo bawdada xoog leh cagaha sare marka loo barbardhigo isticmaalka maalinlaha ah, iyo kursiga fadhiga waa inuu sax ahaadaa.
Speed: Wadayaasha gawaarida ciidaha waa iney raacaan xadka xawaaraha. Xaqiiqda ah in darawaladu ay u isticmaalaan gawaaridooda culus midka maalinlaha ah ee isticmaalka magaalooyinka ee xawaaraha sare iyo dabaqyada dhaadheer iyo qulqulka wadada fasaxa waxay sababi karaan in birta kululeynta iyo fogaanta bareega ay kordho. Wadayaasha waa inay u hoggaansamaan xaddidaadaha xawaaraha, ha wadin daal, hurdo la'aan ama aalkolo oo waa inaysan gaari karin gaariga.
Intaa waxaa sii dheer, darawalada waa inay nastaan ​​muddo dheer si ay u hubiyaan inay joogi doonaan taraafikada muddo dheer xoogga fasaxa iyo 2-3 waa in la siiyaa nasasho saacad kasta. Safarada dhaadheer, laba darawal waa in la joojiyaa haday suurtagal tahay.
Daawooyinka ka hortagaya aragtida ka hor safarka iyo kicinta ficilcelinta waa in aan la qaadan.
Gawaarida waa in lagu hubiyaa qalabka muhiimka ah sida xirmada gargaarka degdegga ah, milkeeriyaha xagal-xagalka ah, dab bakhtiiye kahor bixista.
Darawalada waa iney yareeyaan xawaarahahooda wadooyinka jaranjarada.
Dhanka kale, waxaa muhiim ah in la ogaado in dayactirka iyo xakameynta baabuurta LPG ay aad muhiim ugu tahay nabadgelyadeena wadooyinka. Nasiib darrose, oo ay la socoto sharciyo ay soo saartay Wasaaradda Warshadaha iyo Tiknolojiyadda bisha Juun 2017; Shuruudda baarista "Gaadhiga Warbixinta Gaarka ah ee Gawaarida leh LPG gebi ahaanba waa la tirtiray. In kasta oo ay jirto dayacaadani, milkiilayaasha gawaarida LPG waa in ay lahaadaan xakameynta qalabka LPG, oo ay ku jiraan xargaha kale, oo ay ku jiraan xiridda. Xeerarkii ay sameysay Wasaaradda waa in laga noqdaa, sharciga waa in lagu habeeyaa iyada oo si cad loo arko isla markaana musuq-maasuqa ka jira waa in la joojiyaa.
Qeybaha M2 iyo M3 ee lagu qeexay qaanuunka Yönetmelik ee ku Saabsanaanta, Wax ka badalida iyo Rakibaada Gawaarida Gawaarida ah, tusaale ahaan zorunlu Fire Detection iyo Alarm Systems olan, kuwaas oo waajib ku ah baabuurta leh in kabadan sideed kursi oo aan aheyn darawalka loogu talagay in lagu qaado rakaabka, waa in si go'an loo hubiyo in nidaamku wali shaqeynayo. waa in la hubiyaa. Intaa waxaa dheer, markii daraasiin ka kooban qaybo elektiroonig ah, sida korontada kuleylinta korantada, kafeega iyo nidaamyada kuleylka shaaha, qaybaha hawo qaboojinta iyo nidaamyada madadaalada maqalka, ay ka wada shaqeeyaan cimilo aad u kulul, matoorku waa inuu la kulmaa kuleylka xad dhaafka ah iyo nidaamyadan elektiroonigga ah waa in si joogto ah loo hubiyaa.
Buuxinta daqiiqado Baadhitaan Shilalka Gaadiidka haddii shil dhaco; Booliska degmada, khaaska ah injineerada madaniga ah, dhakhaatiirta iyo injineeriyada farsamada gacanta oo ay tababarteen Rugta injineerada farsamada waa in si wada jir ah loo sameeyaa. Dadka khabiir ku ah maxkamadaha ee la xiriira taraafikada waa in ay tababaraan oo ay sharciyeeyaan Goleyaasha ay quseyso.
Digniinta iyo digniinta waa in la ilaaliyaa inta lagu guda jiro dhismaha wadada iyo howlaha dayactirka. Si looga hortago shilalka sababo la xiriira karti darri awgeed, calaamadaha digniinta waa in lagu dhejiyaa si buuxda oo loo dejiyaa si aysan u saameyneynin arrimo dibedda ah (dabaysha, barafka, roobka, faragelinta aadanaha, iwm).
Intaas waxaa sii dheer, cilladaha wadooyinka, kuwaas oo muhiim u ah shilalka, waa in la tirtiraa, tayada jidadka waa in la kordhiyaa oo jaranjarada lacag la’aanta ah la ilaaliyaa iyada oo la tixgelinayo in shilalka waxa loogu yeero shilalka wadooyinka ay daboolayaan. Darawaladu sidoo kale waa inay xareeyaan xawaarehooda, iyagoo tixgelinaya masaafada birta ah ee wadooyinkan, oo ay wataan gaarigooda si taxaddar leh.
Iyada oo la raacayo arrimaha ay tahay in darawalada iyo lugeeyayaashu ay fiiro gaar ah siiyaan, mas'uuliyiinta ay khusayso waa inay si taxaddar leh uga taxadaraan si loo hubiyo safar nabdoon oo loo helo muwaadiniinteenna iyaga oo qaadaya taxadarka lagama maarmaanka ah. Baadhitaanka dadweynaha ee gawaarida waa lama huraan Golahayaguna diyaar ayuu u yahay inuu qayb ka noqdo kormeeradan. Sida TMMOB Rugta Injineerinka; Waxaan rajeyneynaa fasax taas oo shilalka taraafikada aysan hoos u dhicin, waxaan u dabaaldegnaa iiddii muwaadiniintayada waxaanan u rajeyneynaa safar wanaagsan.
Nooca gaadiidka ayaa doorbiday inta lagu jiro fasaxyada
Imisa rakaab ayaa qaada tareenada xawaaraha sare ee 5
Yassıcaada iyo Foça waxay sii wadaan inay ku raaxaystaan ​​fasaxyada
Wadaha iyo Mootooyinka waa bilaash inta lagu jiro fasax dalxiis?
Balchova Cable-ga Carwada ayaa jabisa Diiwaanka Booqashada ee Fasaxa Ciidda
Qulqulka Akhriska ee Manisa Neefsashada Gaadiidka ee Bayram Holiday
Badbaadada gaadiidka ee shubanka
Calaamadda Amniga Wadooyinka ee Karaman
Road iyo Tretuvar Ku shaqeynta Badbaado iyo Gaadiidka Gaadiidka ee Selendi
Badbaadada Gaadiidka ee Horusocodka Eskişehir
Chamber of Engineers TMMOB
Baarkin dhigashada bilaashka ah ee Bayramda ee Kocaeli
MMO Waxay taageertaa Ololaha Saxiixa ee socda ee Yaxya Kaptan